Zviratidzo zvishanu zvekutengesa pamusika wemusika | Ehupfumi Zvemari
Izvi zviratidzo zvinonyanya kuratidzwa nekuti hazvimbo vimbise kubudirira kwakazara mukuita, asi vanozviita kunze kwekunge sarudzo pamusika wemasheya dzaitwa pasi pechinangwa uye chakavimbika. Nekuti pakati pezvimwe zvikonzero ivo vanopa zvimwe zviratidzo izvo vashoma uye vepakati varimi vanogona kutarisira kubva pakutanga. Kusvika padanho rekuti pamatanho emitengo inogona kupa iyo kupinda kana kubuda zvinzvimbo yechero hupfumi hwemari uye izvo zvinobatsira zvakanyanya kuita sarudzo mumisika dzakasiyana dzemari.
Kubva pane iyi nzira yakajairika, hapana mubvunzo kuti izvi zviratidziro zvatichazotaura nezvazvo kubva zvino zvichiwedzera kupfuura ruzivo chete. Kana zvisiri, pane kudaro, izvi zviridzwa zvekudyara zvine mupiro mukuru uri mukutsvaga maitiro anochinja kupinda kana kubuda mumisika yezvemari. Hazvishamise kuti ichi ndicho chikuru uye zvinogona kutotaurwa kuti ndicho chete chinangwa. Iyo ndiyo yakawedzera kukosha iyo iyo inogona kukupa iwe kubva kune chero mhando yemhando yekudyara zano.
Hazvishamise kuti iwe unogona kuzvishandisa pese paunoenda kuti uwane mari yako inobatsira muzvinhu zvikuru zvemari. Kwete chete mukutenga nekutengesa masheya pamusika wekutengesa, asi mune mamwe marudzi e kumwe kudyara. Semuenzaniso, mbishi zvigadzirwa, simbi dzakakosha uye musika unozivikanwa wemari. Naizvozvo, une pamberi pako sosi nyowani yekupa chimwe chinhu kusimba kune ako ekudyara. Zvisinei nemhando ipi yaunosarudza kubva pane idzi nguva chaidzo.
1 Zviratidziro zvekugadzira marongero
2 Kufamba avhareji: yakanyanya kushandiswa
3 Hukama simba
4 Iyo inozivikanwa stochastic
5 Zvakanakira kushandiswa kwayo
6 Mhedziso pane izvi zvinoratidza
Zviratidziro zvekugadzira marongero
Iko hakuna mabikirwo akavanzika ekuti uwane mari pamusika wemusika. Asi chimwe chezvishandiso zvinowanikwa kune varimi kuti vashande mumisika yemari inoumbwa nehunyanzvi zviratidzo. Kwete chete kuendesa iwo maodha ekutenga, asi kuti uzive kuti ndeipi nguva yakakodzera kwazvo yekubuda mumisika yemari. Chinhu chega chinokanganisa kushanda kwavo ndechekuti ivo vanoda a ruzivo rwakadzika kwazvo izvo chaizvo zvinopfuura kuburikidza nekudzidzira basa muhunyanzvi kuongorora. Zvekuti nenzira iyi, mafambiro acho anogadziriswa zvinoenderana nemaitiro anoratidzwa nemaitiro akasarudzwa.
Kugadzira zano rekudyara maringe nehunyanzvi zviratidzo hazvivimbise chero budiriro mumabasa. Asi zvirokwazvo ichavandudza zvakanyanya zvinotarisirwa kuitira kuti purofiti kubva mukuchengetedza ive zvinopfuura kungoshuva. Nekudaro, iyo kirasi yezviratidzo inenge isingagumi uye zvemarudzi ose. Chero zvazvingaitika, kuitira kuti usashandise zvisizvo mhando yemusika wemari, mhinduro yakanakisa iri mukutenga izvo zvinonyanya kukosha zvinogona kushandiswa zviri nyore mukudyara. Kunyanya avo vanoona maitiro kana simba remakotesheni.
Kufamba avhareji: yakanyanya kushandiswa
Nekuda kwekureruka kwayo, avhareji inofamba ndeimwe yeanonyanya kushandiswa nevashambadzi vasina ruzivo. Hazvishamisi kuti inowanikwa kune vese ma profiles emushandisi nekuti zvinoenderana nekutora zvinzvimbo kana avhareji yapfuurwa nemutengo wezvikamu. Sezvo mune yakapesana kufamba, ndokuti, ibva pamusika apo mitengo iri pazasi peiyo nhanho. Uye zvakare, inofungisisa mukana wakakosha pamusoro pezvimwe zvinoratidza uye kuti ndiyo sisitimu inoshanda yekushanda mune chero musika maitiro.
Zvishoma zvakaoma, asi zvinopesana zvinobudirira, ndiyo MACD (kusangana kana kupatsanuka kwevhareji inofamba). Chaizvoizvo nekuda kwekuvimbika kwayo kutevera maitiro, chero zvingave zviri. Kunyangwe mhedzisiro yaro yakanaka inogadzirwa neshanduko yedungamiriro yekuchengetedza, chikamu kana index mumisika yemari. Kushanda kwayo kuri muchokwadi chekuti misiyano inoratidzwa mumachati inogona kutorwa kunotenga kana kutengesa zvichienderana nekuti akanaka kana kuti akaipa, zvichiteerana. Sezvazviri muchiratidzo chekare, kana MACD yayambuka chiratidzo cheinongedzo inyevero yekuvhura nzvimbo dzekuwedzera, nepo kana ikayambuka pazasi, ichave yekutengesa.
Chimwe chiratidzo chehunyanzvi chisingafanirwe kushomeka pane chero chati yemusimari inonzi RSI (Relative Strength Index). Kunyanya nekuti yakakosha kuyera iyo simba remutengo yemari yakasarudzwa yemari. Kubva pane ino maonero, chishandiso chinoshanda kwazvo chekuona huwandu hwechokwadi hwekukwira kana kudonha mumusika wemasheya. Iko kusununguka kwekutsvaga kunoita kuti ive imwe yeanonyanya kuwanikwa mareferenzi evashandisi. Makanika ayo akavakirwa pachokwadi chekuti sezvo kuvhara kuri kukwirira, kukosha kwechiratidzo ichi kuchawedzera uye zvinopesana. Kusvika padanho rekuziva kana chengetedzo yakanyanyisa (pamusoro pe70) kana kuwedzeredza (pazasi makumi matatu).
Mukati merondedzero iyi, iyo ADX chiratidzo (simba rekutungamira mafambiro) haifanire kunge isipo pane chero muridzi wemari. Kunyanya nekuti yakabatana nesimba rechitambo, chero zvaive panguva iyoyo. Kwete mukupesana nekero yayo iyo yakavhurika kune mamwe marudzi ezviratidzo. Iyo nzira iri nyore kwazvo kududzira kubvira, kana semuenzaniso mutengo wechengetedzo uri kukwira uye iyo ADX iri kudonha, hapana imwe shanduro kunze kweiyo kukwidza inonyanya kukosha. Zvakapesana zvakapesana nemamiriro akapokana. Nekusataura nezvenzira iyi, inonyanya kuitirwa vatengesi iyo inoshanda nemhando dzese dzemidziyo yemari: masheya, ramangwana kana zvigadzirwa.
Iyo inozivikanwa stochastic
Kune rimwe divi, iyo stochastic inomirawo, iyo inoratidzirwa nekugadzira iyo quote maererano neayo akanyanya uye mashoma mutengo. Iyo yakaumbwa nemitsetse miviri iyo inopindirana pasi pematanho ayo anowanzo oscillate pakati pezvikamu makumi maviri nemakumi masere. Zvekuti kana vakasvika pamatanho aya vanenge vachikoka kuzoadzokorora nekutenga kana kutengesa odhiyo, zvichiteerana.
Izvo hazvivimbise kubudirira kwakazara mukushanda, asi zvinodaro, kunze kwekunge sarudzo pamusika wemasheya dzaitwa pasi pechimwe chinangwa uye zvakavimbika maitiro.
Izvo hazvigone kukanganwika kuti stochastic ndeimwe ye most followed figure nechero muridzi wemari ane ruzivo akakosha munyu wake. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe zvakare kubva pakuona kwekukosha kuongorora. Kubva pane iyi nzira yekudyara, hapana mubvunzo kuti iyo stochastic chimiro chinotendeseka kwazvo kupfuura zvese. Hazvishamisi kuti iye anenge achigara achitarisira mafambiro ari kuzotorwa nemasheya, zvikamu uye indices yemasheya. Kushandirwa kwerubatsiro rukuru kuita chero mhando yemaitiro ekudyara. Ndokunge, shure kwezvose, ndezvei, sezvo iwe pachako uchizoziva mushe kuburikidza nekuvhiya kunoitwa pasi peiyi inoshanda kwazvo sisitimu.
Zvakanakira kushandiswa kwayo
Kune rimwe divi, hazvirambike kuti mupiro wezviratidzo izvi watakafumura kwauri uye zvimwe zvakafanana wakakosha zvakanyanya mukusimudzira kwakakodzera kwemari. Kwete chete nekuti ichavandudza mashandiro, asi zvakare nekuti inodzivirira varimi kubva pazviitiko zvakaipisisa zvemisika yekutengesa. Mupfungwa iyi, kune akawanda uye akasiyana mabhenefiti aunogona kuwana kubva ikozvino nezvikosha zvakakosha zvemusika wemasheya. Semuenzaniso iwo atinongedzera pazasi:
Ivo vanogona kukupa iwe anesimba masaini nezve iwo maitiro kupi iwe unofanirwa kuisa mari yako kusevha uye pane zvinopesana izvo zvaunofanira kudzivirira chero zvodii. Mupfungwa iyi, iri firita inosarudzika yekutanga chero mhando yemabasa pamusika wemasheya.
Nekudzidza zvishoma iwe uchakwanisa shandisa maturusi aya pamwe zvikuru kunyatsoshanda. Zvekuti nenzira iyi, iyo purofiti yekuchengetedza kwako iri kuwedzera. Kwete pasina kana kuyedza kusvikira iwe wagona kugadzirisa nzira iyi uye uri nyanzvi yakakwana mukushandisa kwayo kwakaringana.
Iwe hauna kukahadzika kuti zvinokubatsira iwe kuti uite mabasa akachengeteka, kubva pane ese maonero. Iko mari yaunodyara ichave yakachengetedzwa zvakanyanya kubva kunjodzi dzinogona kuitika mumisika yemari uye izvo pasina mubvunzo zvichaonekwa chero nguva muhupenyu hwako semudyari mudiki nepakati.
Kuburikidza neiyi nzira yekudyara iwe unogona wedzera mashandiro kune mamwe matunhu angave kusvikira zvino wanga usati wafunga nezve kutora chinzvimbo mavari. Pakupedzisira, mikana yebhizinesi ichawedzera kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi.
Mhedziso pane izvi zvinoratidza
Chekupedzisira, iwe haufanire kukanganwa kuti izvi zviratidzi zviri pamusoro pezvose rutsigiro rwakajeka pane zvaunofanirwa kuita mumisika yemari. Zvakare kana zvishoma, nekuti pakupera kwezuva ndicho chinangwa chavo. Kune rimwe divi, zvinodawo kuti iwe uzive kuti haisi iyo isingakundike sisitimu uye pane imwe nguva munguva inogona kuunza dambudziko kana uchiita mashandiro pane chero hupfumi hwemari. Zvirinani kuti iwe uiwedzere pamwe nemamwe masisitimu ekudyara kuitira kuti zvivimbiso zvinyatsojeka. Zvekuti pakupedzisira iwe ndiwe unowana rubatsiro rwemafambiro aunoita mumisika yemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Zviratidzo zvishanu zvekutengesa pamusika wemari
Ndezvipi zvakagadziriswa dhipoziti?